Hayaay Milan! Barcelona oo daba socota André Silva – Gool FM
Hayaay Milan! Barcelona oo daba socota André Silva
(Barcelona) 08 Okt 2017 – Kooxda Barcelona ayaa la sheegayaa inay si gaar ah u daba socoto laacibka kooxda AC Milan iyo qaranka Portugal ee Andre Silva oo ay doonayaan mustaqbalka dhow, sida uu dhigayo Mundo Deportivo.
Laacibkan 21-jirka ah ayaa xalay goolna dhigay mid kalana dhaliyay kaasoo uu dhamaystiray Cristiano Ronaldo ciyaartii ay 2-0 xalay ku garaaceen Andorra isreebreebka KA2018.
Waxaa xalay tarabuunka garoonka lagu arkay maareeyaha ciyaaraha Barcelona ee Robert Fernandez, taasoo shaki dhalisay.
Warsidaha reer Spanish ayaa ku doodaya in uu sarkaalkani u tegey inuu u kuurgalo Andre Silva iyo xitaa laacibka Sporting CP ee Gelson Martins.
Andre Silva ayaa xagaagan uun AC Milan kaga soo biiray dhanka FC Porto iyagoo kusoo qaatay €38m iyo bareemiyo dheeraad ah.
Laacibkan ayaa ilaa haatan 6 gool u dhaliyay Milan 6 kulan oo uu saftay Europa League, kuwaasoo ay ku jiraan kulamada isreebreeb-horaadku, balse weli wax gool ah kama dhalin Serie A oo uu badanaa kayd ka yahay.
Wuxuu sidoo kale aad ugu wanaagsan yahay heerka qaran isagoo Portugal 10 gool u dhaliyay 16 kulan oo caalami ah.
Barca oo uu Neymar ka aadey Paris Saint-Germain, Luis Suarez u baahan yahay qalliin, Liverpool ay u diidday Philippe Coutinho, ayay dhici kartaa inay u weecato Andre Silva isla bisha Jannaayo ama xagaaga soo aaddan mase sahlana helitaankiisu.
''SAWIRRO: Markii aan Moratti u sheegay in aan dib ugu laabanayo Ingiriiska ooyin buu la dhacay'' - Paul Ince